Kabtanka Chelsea John Terry oo dib ugu soo laabtay tababarka | Gool FM	Tuesday, February 9th, 2016	Home
Kabtanka Chelsea John Terry oo dib ugu soo laabtay tababarka
Published on November 26, 2012 by BYare
Isniin, 26-11-2012. Kabtanka kooxda Chelsea Jon Terry ee isagu dhaawaca kaga maqnaa kooxda Chelsea yaa lagu soo waramayaa inuu dib tababarka ugu soo laabtay ka hor kulankii shalay ee Chelsea iyo Man City.
John Terry ayaa tababar ku sameenayay garoonka Stamford Bridge ka hor kulankii Chelsea iyo Man City, iyadoo Terry uu dhaawac ka gaaray jilibka mar ay isku dhaceyn Luis Suarez kulankii Chelsea iyo Liverpool ee 11-kii November kaasoo ku idlaaday 1-1.
Terry ayaa dhaawaciisa ka hor ka soo laabtay ganaax 4-kulan ah kaddib fal isir faqooq ah uu kula kacay Anton Ferdinand, balse nasiib daro soo laabashadiisii ayaa soo gaaray dhaawac uu garoomada markale kaga maqnaado.
Waxa uuna sheegay John Terry inuu la shaqeyn doono tababaraha cusub ee Chelsea Rafa Benitez isagoo yiri “Waxaan Khamiistii tababaraha koowaad ee kooxda ku soo dhaweenay Benitez, ciyaartoyda dhamaana waxay eegayaan inay la shaqeeyaan”, sidoo kale John Terry ayaa amaan kala dul dhacay tababarihii faraha ka saaray koobka Champion League ay muddada dheer sugayeen ee Di Matteo isagoo sheegay inuu u rajeenayo inuu guuleysto mustaqbalka isla mar ahaantaana ay mahadsanid ku filnayn in la dhoho.
Wararka	U fur xujadan xiddigan u dheela Man United! Laacib ka mida laf dhabarka United oo gafay su’aal laga weydiiyey taarikhdda kooxdiisa! [Daawo Muuqal]
(Manchester) 09 Feb 2016. Marka jamaahiirta Manchester United ...	Aaron Ramsey oo doonaya inay guul ka gaaraan Leicester City kulanka axada!
(London) 09 Feb 2016 Laacibka qadka dhexe ee kooxda ...	Wariye shaqadiisa ku waayay goolkii Modric iyo Real Madrid oo maxkamad la tiigsan doonta!
(Madrid) 09 Feb 2016 Wariye u shaqeeya Radio Internacional ...	DAAWO: Cristiano Ronaldo iyo wiil yar oo saxiixiisa weydiistay oo arin la yaab leh shalay dhex maray
(Madrid) 09 Feb 2016. Majaajilo yar ayaa ka ...	“Guardiola dib ayuu u soo hindisay kubadda cagta” – David Alaba!
(Munich) 09 Feb 2016 Daafaca kooxda Bayern Munich David Alaba ...	HOR DHAC: West Ham V Liverpool (Kala bax iyo qoladdii caawa wareega shanaad u gudbi lahayd?)
(London) 09 Feb 2016. Waxaa caawa mar kale ...	“Uma arko Suarez inuu yahay badbaadiyaha Xulka Uruguay) – tababare Oscar oo ka hadlay soo laabashada Suarez!
(Montevideo) 09 Feb 2016 Weerar yahanka xulka Uruguay Luis ...	Barcelona oo xaqiijisay in Lionel Messi tijaabooyin caafimaad la marsiin doono
(Catalonia) 09 Feb 2016. Weeraryahanka Barcelona Lionel Messi ...	Aqri liiska 10-ka tababare ee ugu mushaarka badan aduunka (Guardiola ayaa hogaaminaya)!
(Manchester) 09 Feb 2016 Pep Guardiola ayaa noqonaya tababaraha ...	Hubaal qosol kuguma hari doono!!: Dagaal waali ah iyo gabdho feer isla dhacay kulan socday! [DAAWO MUUQAALKA]
(Paris) 09 Feb 2016. Waxaa dhacay dagaal waali ...	GoolFM Mobile (USA)	About usContactsWaxaan NahayNagala Soo Xiriir	Copyright © Gool FM 2016. All Rights Reserved. Hosted By Afro